Intel BF5 Hack - Cheats၊ Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
⬤ status: အွန်လိုင်း
Intel က စစ်မြေပြင်5Hack
သင် GamePron ကိုအသုံးမပြုလျှင် Battlefield5သည်ကျွမ်းကျင်ရန်ခက်ခဲသည်။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့ hack အဖွဲ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါ။ ၁ ရက်ကုန်ပစ္စည်းသော့ကိုယနေ့ဝယ်ပါ။
ဝယ်ယူမှု Access ကို
အခြားကိရိယာများနှင့်မရောနှောပါနှင့်၊ ၎င်းသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ တစ်ပတ်ကုန်ပစ္စည်းသော့ကိုဝယ်ပါ
တစ်ရက်သို့မဟုတ်တစ်ပတ်သည်အချိန်မလုံလျှင်၊ ၁ လကုန်ပစ္စည်းသော့ကိုယနေ့ဝယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ BF5 Intel hack သည်စက်ရုံအဆင့် Aimbot ကိုတပ်ဆင်ထားပြီးသုံးစွဲသူများအားမည်သည့်နေရာတွင်မျှရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ BF5 Intel တွင်သင်အနိုင်ရရန်လိုအပ်သမျှရှိသည်။
ဝယ်ယူပြီးပြီလား ငါတို့ကြည့်ရှုရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ ဘယ်လိုသုံးပါရန် လမ်းညွှန်
Battlefield5Intel Hack သတင်းအချက်အလက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ Battlefield5Intel cheat ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကြီးမားသောစစ်ပွဲတွင်မှန်ကန်တဲ့လမ်းတွင်ပါဝင်ပါ။ Battlefield5သည်စိတ်ရှည်သည်းခံရန်လိုအပ်သောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြေပုံများသည်ရန်လိုစွာကစားရန်ကြီးမားလွန်းသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Battlefield5Intel ဟက်ကာနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်မဟုတ်လျှင်ဖြစ်သည်။ တကယ်လို့သင်က Battlefield5ကိုပရိသတ်ကြီးတစ် ဦး ဖြစ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ပျက်စရာပွဲတွေဘယ်လောက်ရနိုင်တယ်ဆိုတာသင်သိတယ်၊ ဤနေရာတွင် Gamepron ၌သာတွေ့ရသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Battlefield5Intel hack ကိုရယူခြင်းဖြင့်ရှုံးနိမ့်ခြင်းကိုနောက်တဖန်မမြည်းစမ်းပါနှင့်။ သငျသညျလိမ်တဲ့အခါအောင်ပွဲမလွှဲမရှောင်ပါ!
Intel CPU သာလျှင်
အင်္ဂလိပ် Menu ကို
Hack အဆင့်သတ်မှတ်ချက် - ★★★★✩
အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း - ★★★★✩
ဒီကိရိယာမှာ Enemy နဲ့ Item ESP နှစ်ခုလုံးအပြင် Enemy Info တို့ပါ ၀ င်ပါတယ်။ Visibility Checks နှင့် Team / Friendly Checks တွေလည်းပါ ၀ င်ပြီး Battlefield5Aimbot ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အရိုး ဦး စားပေးမှု၊ ချောချောမွေ့မွေ့ရည်ရွယ်ခြင်း၊ FOV စက်ဝိုင်းနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာများကို Battlefield5Aimbot တွင်ရရှိနိုင်သည်။
ရန်သူ ESP (သေတ္တာများ၊ အရိုးများ)
ရန်သူအချက်အလက် (ကျန်းမာရေး၊ အကွာအဝေး)
အသင်း / ဖော်ရွေစစ်ဆေးမှုများ
ချိန်ညှိ aimbot FOV & ချောမွေ့
အရိုး selector ရည်ရွယ်
Battlefield5Intel Hack အကြောင်း
Intel CPU များအသုံးပြုရန်တီထွင်ထားသောဤသည်သည်သူတို့၏ Battlefield5အတွေ့အကြုံနှင့်ရုန်းကန်နေရသူအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ သင်ကသင်၏အသင်းဖော်များကိုသူတို့၏အခန်းကဏ္toတွင်ပါ ၀ င်ရန်အားကိုးနေသဖြင့်ဤဂိမ်းတွင်ပွဲစဉ်တစ်ခုအနိုင်ရရှိခြင်းသည်ခက်ခဲနိုင်သည်။ Battlefield5Intel hack နှင့်အတူထိုသို့မဖြစ်တော့ပါ။ ဤကိရိယာကိုသင်ဝယ်ယူထားသည့်အတွက်သင့်ကိုယ်ပိုင် HWID Spoofer မလိုအပ်ပါ။ ကာကွယ်မှုနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးကိုလည်းပိတ်ထားရန်လိုသည်၊ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့၏ cheat များသည်အလံအတုမဟုတ်ပါ။ Battlefield5Intel hack ကိုအသုံးပြုပြီး screen အပြည့်ဖြင့်ကစားပါ။
ဘာကြောင့် Battlefield5Intel ကိုအခြားပံ့ပိုးသူများထံမှအသုံးပြုရတာလဲ။
Gamepron သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်အကောင်းဆုံး hacks များနှင့်အချိန်ကာလအတော်ကြာစွာချိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ငန်းစဉ်တိုးတက်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ သုံးစွဲသူများအား cheat များကိုကိုယ်တိုင်တပ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအတင်းအကျပ်မပြုပါ။ သူတို့နှစ်သက်သော hack များအားလုံးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သကဲ့သို့အချိန်များစွာရွေးစရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။ မည်သည့်ဂိမ်းကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည်ကိုအရေးမကြီးပါ၊ developer အများစုသည် Battlefield5အကြောင်းကိုမေ့ထားပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိရိယာများကိုထုတ်ပေးနေရုံသာမက၎င်းတို့ကိုလည်းအမြဲတမ်း update လုပ်နေသည်။ အဲဒါမလုံလောက်သေးဘူးဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ cheat တွေအားလုံးကိုသတိမပြုမိကြဘူး။
"Gamepron ဟာရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမခံရသေးသော cheat များကိုကမ်းလှမ်းသည်။"
"သူက Aimbot လား Wallhack / ESP ပဲဖြစ်ဖြစ် Gamepron မှာသင်ရှာချင်တာတစ်ခုရလိမ့်မယ်။"
စိတ်ချရသော In-game menu မရှိပါကမည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ In-game menu သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Battlefield5Intel cheat အတွက် on-the-fly adjustments များကိုမြှင့်တင်ရန်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အခွင့်အလမ်းပေးပါသည်။ သင်၏ FOV စက်ဝိုင်း၏အရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲခြင်း (သို့) သီးခြားအင်္ဂါရပ်များအားဖွင့်ခြင်းစသည်တို့ကို aimbot မည်သို့လည်ပတ်မည်ကိုသင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ Battlefield5Intel hack တွင်ပါ ၀ င်သည့်မည်သည့်အင်္ဂါရပ်တွင်မဆိုဤအရာသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်တစ်ခုခုဖွင့်သို့မဟုတ်ပိတ်လိုပါက In-game menu ကိုသုံးနိုင်သည်။ Gamepron နှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောထုံးစံ hack ဆက်တင်များကိုရှာပါ။
In- ဂိမ်း Screenshots
Q1 ။ ဒီ cheat ကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူပါသလား။
A1 ။ ဒီ cheat ကိုအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းပါသည်။ Hack ကို run> ဂိမ်းကို run> သင်၏ချိန်ညှိချက်များစိတ်တိုင်းကျ> Play ။
Q2 ။ ဒီ cheat stream အထောက်အထားရှိပါသလား
A2 ။ ဟုတ်ကဲ့၊ သင်ဤ cheat ဖြင့်စီးဆင်းနိုင်သည်။ ကြည့်ရှုသူများအတွက်မမြင်နိုင်ပါ။
Q3 ။ Cheat Internal လား External လား။
A3 ။ ဤသည် cheat ပြည်တွင်းဖြစ်ပါတယ်။
Q4 ။ ဒီ cheat ကိုသုံးဖို့အကာအကွယ်နဲ့ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးကိုငါ disable လုပ်ထားရမလား။
A4 ။ အထူးသဖြင့် BIOS တွင်လုံခြုံသော boot ကို အသုံးပြု၍ ဤ cheat ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်ကာကွယ်မှုများကိုပိတ်ထားရန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်မသန်စွမ်းမှုကြောင့်စတင်သောအခါတွင် Error ပေးလိမ့်မည်။
Q5 ။ Hwid Spoofer နဲ့တွဲလား?
A5 ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီလှည့်စားခြင်းမှာ hwid တားမြစ်ထားသောအသုံးပြုသူများအတွက် hwid spoofer ပါ ၀ င်ပါတယ်။
Q6 ။ မျက်နှာပြင်အပြည့် resolution နဲ့ကစားလို့ရပါသလား။
A6 ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ၎င်းကိုမျက်နှာပြင်အပြည့်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဤနေရာတွင် GamePron ၌အသုံးပြုသူများ၏လုံခြုံမှုသည်အမြဲတမ်းအရေးကြီးလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမပြုရသေးသောလှည့်ကွက်များကိုထုတ်လွှင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကြသည်။ တားမြစ်ချက်များငါတို့နှင့်အတူလှည့်စားသောအခါအတိတ်၏အရာဖြစ်ကြ၏, ဒါကြောင့်အဘယ်ကြောင့်တခြားနေရာဘယ်နေရာမှာကြည့်ရှု?
သင်ကိုယ်တိုင်မျက်နှာသာ ပေး၍ BF5 Intel Cheat ကိုယနေ့ရယူသုံးစွဲပါ။
အဆင်သင့် စိုးမိုး ငါတို့ရဲ့ Battlefield5Intel Hack?